घटनास्थल पुग्दा, मझेरी भरी शव, आँगनमा चित्कार ! (भिडियो हेर्नुहोस)
पाँचथर – घटनास्थल पुग्दा, मझेरीमा शव, आँगनमा चित्कार !
फिदिम– पाँचथर जिल्लाको सदरमुकाम फिदिमबाट करिव ६५ किलोमिटर टाढा रहेको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–३, आरुबोटेमा सोमबार अकल्पनीय घटना घट्यो । दुई परिवारका नौ जनाको धारिलो हतियार प्रयोग गरी भएको त्यो विभत्स हत्याको घटना सम्झिँदा काहाली लाग्दो छ ।
सुन्दै आङ सिरिङ्ग हुने घटनाले मन पिरोल्यो । एकाविहानै सामुहिक हत्याको खबर सुनेपछि सञ्चारकर्मीका रुपमा कर्तव्य निभाउन घटनास्थतिर दौडिए । रिपोर्टिङकै क्रममा घटनास्थल पुग्दा होस हवास् नै गुम्यो । घटनास्थलको दृश्य, स्थानीयको चित्कारले मन थामिन सक्ने अवस्थान थिएन ।
विभत्स हत्यापछि यत्रतत्र छरिएका शवहरु देख्दा जो कोहीको आँखा रसाउँछ । मन थामि नसक्नु हुन्छ । ज्यान गुमाएका ७३ वर्षीय बमबहादुर फियाकको शवको अवस्था झन हेरिसक्नु थिएन । अनुहार चिनिदैन । एकपटक होइन पटक–पटक धारिलो हतियार प्रयोग भएको छ ।
अरु शवहरुको अवस्था पनि उस्तै, खुला रहेको ढोकाबाट भित्र मझेरीसम्म लस्करै चारओटा शव थिए ।त्यो भन्दा एक किलोमिटर माथितिर रहेको बमबहादुरकै माहिला ज्वाईंको घरको अवस्थाले झन पीडाबोध गरायो । नाबालक छोरीसहित बुबाआमाको शव पनि उस्तै क्षतविक्षत अवस्थामा थियो ।
मिक्लाजुङ–३ दशमीमा ७३ बर्षीय बमबहादुर फियाक उनकी श्रीमती फसिमाया फियाक, उनकी कान्छी छोरी मनकुमारी फियाक र नातिनी श्रेया फियाकको एउटा घरमा तथा उनकै माहिला ज्वाईं धनबहादुर शेर्माको परिवारमा शेर्मासहित उनकी श्रीमति अस्मिता छोरीहरु यौवना र मुना अनि शेर्माकै घरमा बसिरहेकी इच्छा शेर्माको विभत्स हत्या भएको हो ।
करिव १ किलोमिटरको दुरीमा यी दुईवटा घरहरु छन् । घरका सबै परिवारको हत्या हुँदा बाजे अथवा बमबहादुर फियाकको घरमा बसेकी कक्षा ९ मा पढ्ने सिता फजुल भने भागेर आफ्नो ज्यान जोगाउन सफल भएकी थिइन् ।
बमबहादुर फियाककी कान्छी छोरी मनकुमारी फियाकका श्रीमान मिक्लाजुङ गाउँपालिका निवासी मानबहादुर माखिममाथि हत्याराको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेका बेला उनको शव समेत छुण्डिएको अवस्थाम फेला पर्यो‍ ।
सामूहिक हत्याको घटनामा ज्यान जोगाउन सफल भएकी सीतता झन विछिप्त छिन्, बोल्न नसक्ने अवस्थामा । उनलाई प्रहरीले संरक्षणमा उपचार भइरहेको छ । अनुसन्धानको सबैभन्दा बलियो पाटोका रुपमा प्रहरीले पनि उनै बालिकालाई मानेको छ ।स्थानीयका अनुसार बमबहादुर मनकारी थिए । उनले कसैको कुभलो चिताएनन् ।
गाउँमा पनि मिलनसार थिए । त्यही भएर उनले आफू बसेको ठाउँ नजिकै माहिला ज्वाईंलाई पनि बासस्थानको व्यवस्था गरिदिएका थिए ।अलि टाठीबाठी उनकी प्यारी पनि थिइन्– माइली छोरी । यो बुढेसकालमा माहिला ज्वाईंलाई नै साहारा मानेर बसेका थिए बमबहादुर ।
उनले छोरीपट्टीका नातिनीहरुलाई पनि नजिकैको स्कूलमा भर्ना गरिदिएका थिए । सोमबार रातिको विभत्स घटनाले अब उनको परिवारमा दुईजना छोरीहरु जेठी र साईंलीमात्र बाँकी रहे ।घटना घटेको एक किलोमिटर दुरीका दुईवटा घरको विचमा अरु पनि थुपै्र घरहरु छन् ।
तर ती घरमा बस्ने स्थानीयहरुले पनि घटना घटेको मंगलबार बिहान मात्रै थाहा पाएको बताएका छन् । निकै कहालिलाग्दो दृश्यको साँची बनेर फिदिम फर्कदै गर्दा बारम्बार मानसपटलमा त्यही विभत्स दृश्य घुमिरह्यो । मनमा अनेक प्रश्न उब्जिए । मान्छे कतिसम्म क्रुर बन्न सक्दोरहेछ…
घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्रहरीले ९ जनाको विभत्स हत्यामा फियाककी कान्छी छोरी मनकुमारीका श्रीमान् मानवहादुर माखिम रहेका हुनसक्ने आशंका गरेको थियो ।मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ७ लिम्बा घर भएकी मनकुमारी केही समययतादेखि माइतीमै बस्दै आएकी थिइन् ।
श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेदको अवस्था आएपछि उनी माइतीमै आएर बसेकी थिइन् ।श्रीमान–श्रीमतिबीच सम्बन्ध विच्छेद गर्ने सम्मको अवस्था पुगेका कारण मानबहादु क्रुर बनेको हुनसक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष थियो ।
तर, आशंका गरिएका व्यक्ति नै झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएपछि घटनाको अनुसन्धान थप जटिल र रहस्यमय बनेको छ । अहिले प्रहरीले घटनास्थललाई सिल गरेर अनुसन्धान जारी राखेको छ ।खविन नया कुरोका सम्पादक समेत हुन् । सिधा अनलाइन खबरबाट ।